Saldhigga booliska ee deegaanka Xeraale oo u baahan dib u habeyn – Radio Muqdisho
Saldhigga booliska ee deegaanka Xeraale oo u baahan dib u habeyn
Taliska ciidanka booliska Soomaaliyed ee deeganka Xeraale ee gobalka Galgaduud ayaa ka warbixiyay sida ay u shaqeeyaan iyo baahiyaha ka jirta deegaanka.
Maxamed Cali Maxamed Taliyaha booliska deegaanka xeraala oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa tilmaamay in deegaanka ay ku leeyihiin saldhig boolis oo ka shaqeeya sugidda amniga deegaanka iyo deegaanada kale ee ku xeeran, waxaana uu intaa ku daray in xaaladda amni ay tahay mid la isku haleyn karo.
Taliyaha oo ka hadlay baahiyaha ka jira deegaanka ayaa sheegay in saldhigga booliska uu ka koobanyahay labo qol oo kaliya, isla markaana ay u baahanyihiin sidii dib u balaarin loogu sameyn lahaa saldhigga ay ka howlgallaan, ayna u gudbiyeen hay’adaha ku shaqada leh si qolal kale oo dheeri ah looga hirgelin lahaa goobta.
“Labo qol oo kaliya ayuu ka koobanyahay, marka waxa uu u baahanyahay in balaarin lagu sameeyo, waxaana dowladda dhexe ka rajeyneynaa inay gacan ka geysato dhismaha qolalka ka dhiman saldhigga deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud”. ayuu yiri Maxamed Cali Maxamed.
Guddomiyaha gobolka oo xarigga ka jaray xarumo dib u dhis lagu sameeyay oo ku yaala Shangaani”sawiro”
AMISOM oo deeq dawo ah gaarsiisay cisbitaalka Baledweyne